Andicingi ukuba ukuThengisa malunga nokwenza iMali | Martech Zone
Ukuba kukho amagama amabini endiwabonayo kolu shishino endenza ukuba ndincwine ndimke, lelo binzana ukwenza imali. Andifuni ukuya kwezopolitiko zamva nje, kodwa inkampani yenze isigqibo sokumisela iphulo lokuthengisa elinempikiswano. Omnye woogxa bam wathi yayikukuthengisa okuqaqambileyo kuba kuzakubenza itoni yemali.
Jonga, bayinkampani kwaye banokwenza nantoni na abangathanda ngayo ngentengiso yabo. Ukutsiba kwimpikiswano edumileyo kunokuba lukhulu kwibhola yamehlo kunye neempawu zedola. Kodwa andikholelwa ukuba injongo yentengiso kukwenza imali. Ndisebenze kwiinkampani ezininzi ezazimalunga nokwenza imali, kwaye bayasokola okanye bafe- kuba ukwenza imali yeyona nto ibalulekileyo.
Amaphephandaba -Ndisebenze kumaphephandaba anegunya elilodwa kwintengiso kwaye ndiqhubekile nokunyusa amazinga abo. Iindaba zaba "kukugcwalisa phakathi kweentengiso". Xa ukhuphiswano luza kwi-intanethi, abathengi kunye nabathengisi babengenakulinda ukutsiba inqanawa.
SaaS -Ndisebenzele enye yeSoftware enkulu njengababoneleli ngeenkonzo kolu shishino. Ngenzondelelo yabo yokubetha iinjongo kwikota nganye, ndibabukele beshukumisa abathengi kwaye emva koko ndabaqhubela umthengi olandelayo obaluleke ngakumbi. Xa abasunguli baqalise ukuqala kwabo okuzayo, abo bathengi bakudala khange bayiphendule ifowuni. Kwaye xa izisombululo ezitsha zafunyanwa, abathengi abalibalekileyo bafuduka.
Ukwenza imali yinjongo yexesha elifutshane ethatha ukugxila kuyo yonke into eyimfuneko ekwakheni ishishini eliqhuba kakuhle. Imali yinto etshintshana phakathi kwenkampani kunye nabathengi bayo ngexabiso abazisa ngalo. Imali ibalulekile-ukuhlawulisa kakhulu kwaye umthengi wakho unokuziva ekhululwe kwaye ahambe. Ukuba awuhlawulisi ngokwaneleyo, usenokungabi nakho ukuhlawula ngokufanelekileyo umthengi. Imali iyahluka… kodwa ukwakha ubudlelwane obuqinileyo yeyona nto ibalulekileyo.
Ukuthengisa kudlala indima ngokuzama ukufumana, ukuchonga, kunye nokujolisa kubathengi abaza kuba imfuneko imveliso okanye inkonzo yakho kwaye ejongeka njengabathengi bakho. Veki nganye ndihamba kude nezahlulo apho ndingakholelwa ukuba ndikulungele ukusebenza nenkampani. Ezinye iinkampani ziye zicaphuke ukuba andizukubanceda- kodwa ndiyazi ukuba injongo yexesha elifutshane ukwenza imali waphantse walitshabalalisa ishishini lam ngaphambili. Xa ndafumana umthengi olungileyo, ndalinda ngomonde ukusebenza nabo, ndabeka ulindelo olufanelekileyo, kwaye ndaqinisekiswa ukuba bayazifuna kwaye bafuna iimveliso kunye neenkonzo zam… kulapho sakha ubudlelwane.
Makhe ndibeke imizekelo embalwa phaya:
Ndinceda i Inkampani yokuqokelela imali esebenza nezikolo ngoku. Banokukhula okumangalisayo kule minyaka imbalwa idlulileyo bendibanceda-kodwa kungenxa yokuba bajolise kakhulu kwizikolo ezifanelekileyo abaza kusebenza nabo. Bayakuphepha ukusebenza ezikolweni apho imveliso yabo inokubangela ungquzulwano phakathi kwabafundi…, endaweni yoko, bayazixhasa ezo zikolo ngobubele bazo. Ngaba banokwenza imali ngokubathengisela? Ewe… kodwa bayazi ukuba oko akusiyo eyona nto ibalulekileyo esikolweni.
Ndinceda i inkampani yeziko ledatha ngubani owenza izinto ezintsha kwaye ozimeleyo. Banokwenza imali ngokuthengisa ukubandakanyeka okuncinci unyaka wonke… banenzuzo enkulu kwixesha elifutshane. Nangona kunjalo, bayazi ukuba abathengi abakhulu, abashishini abanemiceli mngeni yokuthobela kulapho baqaqamba khona. Ke, bathengisa amashishini amakhulu kwaye bayakuphepha ukuthengisa kwiinkampani ezincinci.
Ndinceda i iinkonzo zasekhaya Ishishini elenza uphahla, ukubala, kunye nezinye iinkonzo zangaphandle. Lishishini losapho eliye lajikeleza phantse iminyaka engama-50 ekuhlaleni. Ukhuphiswano lwabo lwenza izithembiso kwaye lushiya umkhombandlela wokuzibandakanya okoyikisayo ngokusebenzisa ukuthengisa okunzima kunye nokutyhala wonke umthengi ukuba avale okanye i-upsell. Umthengi wam ukhetha ukuhamba kude nokuzibandakanya kwaye, endaweni yoko, athengise kubahlobo, kusapho, nakubamelwane babathengi babo.
Ndinceda i vavanyo lwamanzi Ishishini elinjongo yalo yokuqala yayikukunceda abathengi bavavanye umgangatho wamanzi kunye neekiti zasekhaya. Nangona kunjalo, bachonge umba omkhulu ngakumbi apho oomasipala babengenayo isoftware yokulandela umkhondo ukuthobela ngokupheleleyo imigaqo yasekhaya, yelizwe, kunye neyomdibaniso. Bayazi ukuba banokwenza impembelelo enkulu ngakumbi ngeenjongo zabo zokunceda ukutshintsha umgangatho wamanzi elizweni ukuba banikezela kwaye bajolise ixesha elide kwizivumelwano zikarhulumente.
Kuzo zonke ezi meko, asijonganga Yenza imali. Iinzame zethu zentengiso kukwandisa kwaye sitshatise iimveliso kunye neenkonzo zamashishini esiwancedayo kubaxhamli abanokuba nakho ukubakhonza. Zonke ezi nkampani zikhula kakuhle, kodwa kungenxa yokuba bayazi xa kufuneka befulathele ukwenza imali… bangayilandeli.
Nawuphi na umthengisi unokunceda inkampani Yenza imali. Bambalwa abathengisi abanceda amashishini ukuba akhule kwaye akhule kunye nabathengi abazixabisayo iimveliso kunye neenkonzo zabo. Kule minyaka ilishumi idlulileyo kunye neshishini lam, ndiye ndafumanisa ukuba imali iza njengesiphumo sokufumana kunye nokusebenza nabathengi abalungileyo. Ukuthengisa kwam kukufumana ezo nkampani, hayi ukujonga nokwenza imali. Ndiyathemba ukuba yeyona nto ujolise kuyo.
tags: ukwenza imaliurhweboimali